Gaafow: Waxaan qabanay baasabooro la saaray Fiisaha Sudan oo loo weday Somaliland – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Taliyaha socdaalka & jinsiyadaha Soomaaliya Jen. Cabdullaahi Gaafow Maxamuud ayaa sheegay shalay oo isniin ah inay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ay ku qabteen baasaboorro loo waday Somaliland.
Jen. Gaafow waxa uu sheegay in tirada baasaboorradu ahayd 50, kuwaasoo isugu jiray baasaboorkii cagaarnaa iyo midka hadda la isticmaalo ee E-Passport-ka ah.
Gaafow ayaa tilmaamay iney rumeysan yihiin in baasaboorka cagaaran loo adeegso arrimo argagixiso.
”Baasaboorka cagaaran waxaa loo isticmaalaa argagixisanimo, tiradooduna waxay ahayd 42 baasaboor oo kuwa cagaaran ah iyo siddeed E-Passort ah, raggii watayna gacanta ayaan ku haynaa baaritaanno ayaana ku socda,” ayuu yiri Jen. C/llaahi Gaafow.
Wuxuu sheegay Jen. Gaafow in dhamaan 50-ka baasaboor ay saran tahay Fiisaha dalka Sudan, arrinkaas oo uu ku tilmaamay wax lala yaabo, wuxuuna xusay iney safaaradda arrintaas wax ka weydiin doonaan.
“Dhamaan baasaboorada waxaa saran fiisaha dalka Sudan, mana u maleynayo in Sudan oo aqoosan dowladda Soomaaliya ay baasaboorka cagaaran ku bixineyso fiiso, laakin safaaradda ayaan arrintaas weydii donna” ayuu sidoo kale yiri Gaafow.
Dhinaca kale, raggii lagu qabtay baasaboorradan ayaa iyaguna warbaahinta u sheegay inay baasaboorradan yihiin kuwo ay leeyihiin arday ku nool Somaliland, isla markaana ay fiiso uga soo qaadeen safaaradda Suudaan ee ku taalla Muqdisho.
Xukuumada Soomaaliya ayaa horey u joojisay isicmaalka baasaboorkii hore ee cagaarnaa, waxaana qofkii lagu qabto ay ku sheegeen in uu ciqaab adag uu muteysan doono ama loo aqoonsan doono inuu Al-shabaab ka tirsan yahay.
Dadka ku nool Somaliland ayaa maamulka halkaas ka jira u diidaa adeegsiga E-passaport, waxaana taasi ku kaliftay iney si qarsoodi ah fiisooyin uga doontaan safaaradda Sudan ku leedahay Muqdisho si ay ardaydooda waxbarasho ugu heelan dalka Sudan.